Maamulka Xaafuun iyo Kalluumaysatada oo iskaashanaya oo soo furtay dooni ku afduubnayd halkaasi. – Radio Daljir
Maamulka Xaafuun iyo Kalluumaysatada oo iskaashanaya oo soo furtay dooni ku afduubnayd halkaasi.
Xaafuun, Nov 25- Abaabul ay sameeyeen dadka ku dhaqan degmada Xaafuun ee gobolka Karkaar ayey ku soo furteen dooni laga leeyahay dalka Yemen iyo shaqaalihii saarnaa oo koox burcad-badeed ahi ay muddo haysteen.
Is-abaabulkaan ay sameeyeen dadka deegaanka Xaafuun, waxay sidoo kale gacanta ku soo dhigeen kooxdii burcad-badeedda ahayd ee doonidaasi iyo shaqaalaha saarnaa ay u afduubnaayeen, mana jirin hawlgalkaasi wax khasaare ah oo ka dhashay.
Doonidaan oo burcaddu afduubatay dhammaadkii bishii September ee sanadkaan ayaa lagu haystay deegaan ka mid ah biyaha degmada Xaafuun oo ka tirsan gobolka Karkaar, waxaana soo furashadeed oo maanta dhacday iska kaashaday odayaasha deegaanka, ciidamada maamulka degmada iyo kalluumaysatada deegaankaasi ka hawlgasha.
Doonidaan iyo dadkii saarnaa oo ka soo jeeda dalka Yemen ayaa la sheegay hadda in ay gacanta ku hayaan maamulka degmada Xaafuun, waxaana lagu wadaa mardhaw in loo sii galbiyo xagga wadankii ay ka soo jeedeen.
Xilligii doonidaan la afduuban waxaa lagu weeraray ayadoo maray Raas-casayr, waxaana hawlgalka lagu afduubtay ku dhintay mid ka mid ah burcad-badeeda, waxayna intii aysan la imaan Xaafuun muddo ku haysteen deegaanka Garacad oo ka mid ah gobolka Mudug.
Dhawr hawlgal oo noocaan oo kale ah oo ka dhacay xeebaha Puntland ayaa lagu guulaystay in sidaan oo kale loo soo furto dooni ama markab u afduubnaa Barcad-badeed, waxaana kan kii ku xigay uu ka dhacay degmada Caluula halkaasi oo dooni ku afduubnayd Burcad-badeed si xoog ah looga furtay oyadoo gacanta lagu dhigay isla kooxdii Burcadda ahayd.